Libanona: Lohahevitra Maro Anaty Fehezana Iray · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Septambra 2017 6:44 GMT
Lohahevitra maro isan-karazany no nakarina noresahana tao amin'ny tontolon'ny blaogy Libane tamin'ny herinadron'ny 15 Janoary 2007. Ireto manaraka ireto ny ampahany amin'izy ireo, izay ahitana rohy mitondra antsika mivantana aminà lahatsoratra efa voafantina miresaka ireo lohahevitra tsirairay avy ireo. Manantena izahay fa hahazo fahafinaretana ianareo eo am-pamakiana azy ireo.
Momba ny Tontolo Iainana:
Mandeha tsara ary tena mahomby ny fitrandrahana ireo solika very manerana ny morontsirak'i Mediterane vokatry ny fanapoahan'i Israely ny tobim-pamatsiana solika sivily ao Libanona tamin'ny faran'ny volana Jolay araka ny vaovao azo farany arahin'ny rakitsary nataon'i Blogging Beirut.
Momba ny Zavakanto, Poezia ary Hosodoko:
Miangona any amin'ny faravody kaopy ny tain-kafe rehefa amboarina amin'ny fomba Libane taloha, antsoina ihany koa hoe Kafe Tiorkia. Ampiasain'i Ibn Bint Jbeil mantsy izy ireny rehefa manao hosodoko izy. Avoakany ao amin'ny blaoginy avokoa ireo hosodoko nataony ireo sady arahany poezia.
Mbola maro ireo sary sy hosodoko nataon'i Mazen izay navoakany tao amin'ny blaoginy antsoina hoe Kerblog. Ary mbola misy maromaro ireo hosodoko nataon'i Suzanne Alaywan izay efa navoakany ihany koatao amin'ny blaoginy.
Momba ny Toekarena:
Misedra olana goavana ilay toeram-piantsonan'ny ski, izay tena mahasarika ny mpizahatany, ary loharano fototra amin'ny fidirambolan'i Libanona araka ny voalazan'i TearsforLebanon.
Lasa lohahevitry ny lahatsoratra iray mitaky fandalinana sy manantantara izay nosoratan'i Marxist avy any Libanona, ny sendikan'ny mpiasa amin'ny ankapobeny sy ny sendikan'ny mpiasa Libaney izay vao avy nanatevin-daharana ny hetsi-panoherana nitranga tao Beiroty. Nifarana tamin'ity famintinana eto ambany ity ilay lahatsoratra:
Tsy fikambanan'ny mpiasa ireo sendika amin'izao fotoana izao, fa fikambanan'ireo mpiaradia maro samihafa nipongatra hiaro ny tombontsoan'ireo mpiaro ny sekta ireo, ary mazava ho azy, amin'izy ireo: tsy misy izany adin-tsaranga izany.
Momba ny Media:
Petadrndrina sy sorabaventy an-dalambe no saika hita eny rehetra eny, na eny an-dalambe izany na eny amin'ny rindrin'ny tranobe ao Beirut. Noraisin'i Jamal io lohahevitra io, amin'ny fombany mivazivazy ary faranany amin'ny filazàna hoe :
Any amin'ny faramparan'ity andro ity, dia ho lasa fitaovana iray manandanja hitenenana ireny sora-baventy mipetaka eny an-dalambe eny, izy ireny no fitaovam-pitenenana maimaimpoana ho an'ireo olona manorisory sy ireny mpihira izay ezahanao foana ny tsy handre izay lazainy.
Momba ny Politika:
Mitantara ny rikoriko tsapany momba ny toejavatra miseho ankehitriny ao Libanona i Mirvat:
Leo antsika aho. Leo ny feon'ny tarainako sy ny fomba fijeriko ary ‘ireo vahaolana’ aho ary tofoka amin'ireo fanazavana sy ny fifamaliana ary ny fanahy osa. Am-pahatsorana, leo ireo olana Libane aho…
Mifidifidy tavan'olona isika, manavakava-bolokoditra ary tia mitsaratsara olona. Kamo ary tsy misaina isika, Tsy manaiky ho diso mihitsy isika ary milaza foana fa lasibatry ny tantara sy izao tontolo izao ary ny fiarahamonina. Tsy mahafapo antsika tanteraka ny firenentsika, ny governemanta foana matetika no lazaintsika ho tompon'andraikitra rehefa misy zavatra tsy mety ary mahatsapa isika fa tsy misy manohana antsika mihitsy izao tontolo izao. Mihevitra koa isika fa fanomezana avy amin'Andriamanitra ho an'ny tany isika, na aiza na aiza misy antsika, ka faly ny hifaninana amin'ny hafa hatrany ary manambonimbony tena. Mpanararaotra sy tia tia kely avokoa ny ankamaroantsika ary dia mitaraina fotsiny amin'ny ataon'ny hafa. Samy te-handao ny firenentsika avy isika satria tsy mahafapo tanteraka antsika ka rehefa te-hanambonimbony tena isika, na aiza na aiza misy antsika, dia toa te-hiverina eto amin'ny firenena indray, dia avy eo ny mpiray tanindrazana amintsika ihany matetika no hieboeboantsika satria hoe mipetraka any am-pitan-dranomasina isika.
Ny fomba fisokajiana ny tsirairay araka ny fomba fijerin'i Ms Levantine
Mahita aho fa na dia manaiky aza ny olona tsirairay hoe manahirana ny zava-drehetra ary miaina izany avokoa na aiza na aiza toerana aleha, raha ny marina dia tsapa fa tsy mitovy mihitsy ny fomba fijerin'ny olona ny “tena antony mahatonga” ny fifandirana manerana an'i Libanona. Azo zaraina ho sokajy samihafa 9 ireo sekolin'ny fieritreretana maro samihafa…
Ary eto amin'ny EDB, ireo karazana tantara momba ireo mpitsikilo, Paris 3, hetsi-panoherana, toerana fandihizana amin'ny alina, fety, ny famelezana sy fanambaniana mpitoraka blaogy, fampihorohoroana ara-tsaina sns… dia hita anaty lahatsoratra iray avokoa sady mora vakiana.
Ary farany, momba ireo Jiosy ao Libanona:
“Liza Srour … ilay vehivavy Jiosy tavela farany tao Libanona” dia lahatsoratra iray nadika avy amin'ny fiteny Arabo nosoratan'i Anarchorev.
Amin'ny herinandro indray isika mihaona.